निर्मला हत्याकाण्डमा प्रहरीलाई रावलसँग ठूलो उपलब्धी प्राप्त, को हुन् रावल ? - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७५ मंसिर २१ गते ६:४१
काठमाडौं, २१ मंसिर । प्रहरीले निर्मला पन्तका हत्यारानजिक पुगेको दाबी गरेको छ । भीमदत्तनगर नगरपालिका–१८ का १७ वर्षीय प्रदीप रावललाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेको छ । रावल काठमाडौंबाट पक्राउ परेसँगै अनुसन्धान साँघुरिएको प्रहरीले जनाएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक ९आईजीपी० सर्वेन्द्र खनालले नै रावलको बयान लिएका छन् । रावलले निर्मला बलात्कार तथा हत्यामा आफ्नो संलग्नता रहेको संकेत गरेका छन् । उनी लागुऔषध दुव्र्यसनी रहेको बताइएको छ । उनलाई यसअघि सीआईबीका डीएसपी अंगुरबाबा जोशी नेतृत्वको टोलीले कञ्चनपुरमै पक्राउ गरेको थियो । सोधपुछपछि उनी रिहा भएका थिए ।
‘रावलसँग बयान लिने क्रम जारी छ । उनले घटनामा आफ्नो संलग्नताको संकेत गरेका छन्’, प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो, ‘कञ्चनपुरमा बुधबार पक्राउ परेका दुई जनाको पनि बयान लिएपछि थप तथ्य खुल्न सक्छ । तर, उनीविरुद्ध बलियो प्रमाण भने फेला परेको छैन ।’
गृह मन्त्रालय स्रोतले पनि यो घटनाको निचोडमा पुग्न लागेको बतायो । ‘प्रहरीले अपराधीनजिक पुगेको भनेको छ’, गृह स्रोतले भन्यो ।
को हुन् रावल ?
पुष्टि होला आरोप ?
प्रहरीले नौ जनाको डीएनए परीक्षण गरिसकेको छ । अझै १० जनाको डीएनए परीक्षणको तयारीमा प्रहरी छ । मंगलबार पक्राउ परेका रावलले साविती बयान दिए पनि डीएनए रिपोर्ट कुर्नुपर्ने बाध्यता प्रहरीलाई छ । ‘अनुसन्धानका सबै विकल्प प्रयोग भएका छन् । रिजल्ट नआई यसबारे केही भन्न सकिन्न’, सीआईबीका प्रमुख शाही भन्छन्, ‘रावलको बयानबारे केही भन्न मिल्दैन, तर हामी अनुसन्धानलाई निचोडतर्फ लैजाँदैछौँ ।’
भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी १३ वर्षीया निर्मलाको हत्या भएको एक सय ३१ दिन भइसकेको छ । साउन १० गते साथी रोेशनी बमको घरमा होमवर्क गर्न गएकी निर्मलाको शव भोलिपल्ट भीमदत्त नगरपालिका–२ र १८ को सीमामा पर्ने निम्बुखेडा खोला नजिकै उखुबारीमा भेटिएको थियो ।